Xubno la sheegay in ay katirsan yihiin Al-Shabaab oo Madaxooda lacag la dul dhigay (Aqriso Magacyada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Dowlada Kenya ayaa soo bandhigtay magacyada afar nin oo la heesto in ay katirsan yihiin Xarakada Al-Shabaab, kuwaa oo lagu eedeeyay in ay ku lug lahaayeen weeraro dad badan lagu dilay oo ka dhacay Deegaano hoostaga magaalada Mandheera.
Taliyaha Boliska Kenya, Joseph Boinnet, in lacag dhan 8 million oo Shillinka Kenya, ay dul dhigeen madaxdyada afar nin uu sheegay in ay ka dambeeyeen Weerar lagu qaaday Bas iyo goob kaawada laga qodo oo kutaala Duleedka magaalada Mandheera.
Xubnahan Dowada Kenya ay lacagta dul dhigtay madaxooda ayaa kala ah , C/llaaahi Isaaq, Idris Isaaq, Axmed Aweys iyo Maxamed Shide, ragan ayaana loo heesta ain ay ku lug lahaayeen labo weerar oo dad badan lagu dilay oo ka dhacay Duleedka magaalada Mandheera.
Ragan labada Weerar ee lagu eedeeyay in ay qeybta ka ahaayeen ayaa lagu dilay dad ka badan 60-qof oo Kenyan ah, weeraradan ayaana siyaabo kala duwan uga dhacay duleedka magalaad Mandheera sanadii 2014-kii, waxaana ragan iyo xubno kale oo la tuhmayo ay booliiska Kenya ugu jiraan baadi goob.
Taliyaha booliiska Kenya, ayaa sheegay in afartan nin ee la baadi goobayo ay ka howlgalaan Deeganao katirsan magaaalooyinka, Mandheera , Wajeer iyo waliba Gobolka Gedo ee Soomaaliya, waxaana taliyaha sheegay in ay halis yihiin ragaasi.
Dowlada Kenya ayaa wali ka cabsi qabta in Al-Shabaab gudaha dalkeeda ay ka geestaan weeraro kale oo halis ah, waxaana la adkeeyay amaanka xuduudaha dalka Kenya iyo magaalooyinka kuyaaa dhinaca xadka.
VIDEO : Kenya Oo Si Jees-Jees Leh Uga Hadashay Xanibadii RW CC Ee Garoonka Jomo Kenyatta